Inkxaso yokujoyina iMagnethi Trackpad 2 kunye neMicrosoft Keyboard | Ndisuka mac
Inkxaso yokujoyina iMagnethi Trackpad 2 kunye neMicrosoft Keyboard
Sigqibezela namhlanje ngokucebisa ngenkxaso eza kukuvumela ukuba ube nedesika yakho icwangciswe ngakumbi, ukwazi ukubambelela kwi Magic Trackpad 2 Ngekhibhodi yakho yoMlingo. Xa sithenga iMac, ikhibhodi yeMicrosoft kunye neMouse yeMicrosoft 2 iza kumgangatho osebhokisini.zi nguqulelo ezintsha zezixhobo zombini Zenzeka ukuba zibe neebhetri zangaphakathi kunye nemilo yentsimbi kwimeko yeKhibhodi yoMlingo.
Kodwa iApple iphinda ihlaziye ubume kunye nobungakanani beMagnethi yokulandelela 2 ngokuyinika imilo emitsha eyenza ukuba izinze kwaye inciphe. Ukuba unayo zombini iMagnp Trackpad 2 kunye neKhibhodi yobuGcisa, uya kuyithanda le ndawo yokujoyina.
Njengoko ubona kwimifanekiso esiyincamathisileyo, yinkxaso eyenziwe ngerabha emhlophe esivumela ukuba siyifumane zombini iMagnpak Track 2 kunye neKhibhodi yeMicrosoft ngokukhawuleza nangokulula. Inkxaso ibhetyebhetye ukuze ungabinangxaki yokufumana zombini izincedisi kwaye yenziwa ngohlobo lokuba xa ubeka ezi zinto zimbini kwi Nokuba utyalomali, abayi kuwela emngxunyeni wabo, Oko kukuthi, inenkqubo yokhuseleko ngokuchasene nokuwa.
Ungathenga inkxaso kule webhusayithi ilandelayo kwaye inexabiso le- I-27, i-89 i-euro. Inyaniso kukuba yinto yokucinga ecingisiswe kakuhle kunye nokugqitywa okuhle. Ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezinto endizakuzigcina engqondweni xa ndifuna ukuzinika isipho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Inkxaso yokujoyina iMagnethi Trackpad 2 kunye neMicrosoft Keyboard
Andazi ukuba yeyiphi iwebhusayithi, kuba ndicinga ukuba khange uyibeke kodwa ndiyithengile kodwa iyafana, kungcono ukusuka ezantsi okungatyibiliki kwisinido brand amazon kwaye le iyi- € 24,98.
Unyanisile uJimmy, iwebhu sele ikho kwinqaku. Enkosi ngokusifunda. Kudala ndijonga le undixelela yona kwaye iyafana, ke ngexabiso eliphantsi kwiAmazon.
Sele unayo iwebhu, nangona enkosi kumfundi usixelele ukuba ikwakhona kwiAmazon kwaye ivela kuhlobo lwespidino. Enkosi ngokufunda!
Ngaba iMagnetic Trackpad ingatshintshwa yi-Magic Keypad kunye ne-Calculator Combo ikhibhodi engenazingcingo?.
Imifanekiso yeBadia kwiPDF, simahla ixesha elilinganiselweyo
Ukuphakama kobushushu kwi-MacBook yam eyi-intshi ezili-12